HomeTurkeyAla nke Anatolia Region21 Diyarbakir
Mgbasa ozi nke akwụkwọ akụkọ Batman boysöz bidoro ị rụpụta nsonaazụ ya na chọrọ nke ịgbanwe ụzọ ụgbọ oloko, nke na-arụ ọrụ na Batman-Diyarbakır Railroad, ebe ihe dị ka puku mmadụ 15 na-eme njem kwa ụbọchị, n'ime ụgbọ njem ụgbọ oloko. [More ...]
A tụrụ nkume Diyarbakır Batman Njikọ na nso Zorava Village nke Batman, ndị njem nwere oge ụjọ. Dika ozi enwetara, umuntakiri jiri okwute mechie okwute na nso obodo Batman nke Zorava. Nkume okwute [More ...]
Diyarbakır Metropolitan Municipality, Bismil district, ụmụ amaala nke nnwere onwe na-eji ụgbọ njem ọha na eze nke 2 kwa ụbọchị n'etiti oge ọrụ 07.00 na 17.30 nke ọrụ ụlọ ọgwụ na-aga n'ihu. Diyarbakır Mpaghara Obodo, [More ...]
Onye isi otu United Transport Worces (BTS) Diyarbakır Onye isi Ala Nusret Basmacı kwuru na enwere ihe ọghọm ụgbọ okporo ígwè 4 - 5 kwa ọnwa n'ihi agabiga agabiga na ọkwa ụgbọ elu dị n'etiti Batman na Diyarbakır. [More ...]
Diyarbakır Intercity Bus Terminal Ntinye Nsogbu edozi
Gọvanọ nke Diyarbakir na Diyarbakir Metropolitan Mayor V.Hasan Basri Guzeloglu, ndị e mere atụmatụ megidere iwu okporo ụzọ Diyarbakir Intercity Bus Terminal Enterprises (DTITI) hazigharịrị ijere ọha mmadụ kwuru. ụmụ amaala [More ...]
Diyarbakır Metropolitan Municipal, Diyarbakır Intercity Bus Terminal Operations (DİŞTİ), nke bụ enyo nke obodo ahụ, kpochara mmiri na-erigbu ndị mmadụ n'okporo ụzọ, n'ụtụtụ, site na iji mmiri kpochapụ ebe ahụ, n'ụtụtụ, ebe a na-ahụkarị ụmụ amaala. [More ...]
Mgbapụta Ọkwa mmiri na-eme ka ihe ọghọm dị n'okporo ụzọ okporo ụzọ
Onye isi ala BTS Diyarbakır Onye isi Nusret Basmacı kwuru na enwere ihe mberede ụgbọ oloko kwa ọnwa n'ihi ịgabiga larịị iwu na-akwadoghị na ndị ọchịchị kwesịrị ịkpachara anya ozugbo enwere ike. United Transport Workers Union (BTS) Diyarbakır [More ...]
A na-arụzigharị ụlọ na emebi emebi na Diyarbakır
Diyarbakır Metropolitan Municipality Road Construction Mmezi na Nchikota Akụrụngwa, a na-arụzi obodo site na okwukwu ndị emezighi ma ọ bụ bibie. Diyarbakır Obodo na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka nchekwa nke ndị na-agba ụkwụ na ndị ọkwọ ụgbọala [More ...]
Daybọchị izizi mbụ na Diyarbakır Transportation n'efu
N'ikwekọ na ntuzi aka nke Hasan Basri Güzeloğlu, Gọvanọ nke Diyarbakır na osote onye isi obodo nke Metropolitan, ụgbọ njem ụgbọ ala nke ndị obodo na ụbọchị mbụ nke 2019-2020 agụmakwụkwọ ga-eburu ụmụ amaala na-akwụghị ụgwọ n'etiti 06: 00 ruo 18: 00 awa. [More ...]
Passzọ ụgbọ oloko Diyarbakilr Dị n'okpuru Oke dịka Horror Ọwara
Ebe ụzọ ụgbọ oloko nke ụgbọ elu Diyarbak railr adịghị anya dị ka ebe egwu dị na sinima. Citizensmụ amaala na-atụ egwu ịgafe ọdụ ọdụ. Ekpebiri ikpo okwu nke Diyarbakır TCDD Station ka ọchịchịrị gbara. Kwa ụbọchị, ọtụtụ narị mmadụ na-aga n'ụlọ ha [More ...]
Obodo Diyarbakır nke ga-enye ndị njem ọhaneze ga-akwụ ụgwọ n'oge 4 Day n'oge Eid al-Adha. N’ụbọchị mbụ nke ehihie na ememme ahụ, a ga-ebuga ụmụ amaala gaa n’ili ndị na-akwụghị ụgwọ site na ebe edepụtara na mgbanaka a ga-eji ụgbọ 63 mepụta. [More ...]
Ndi diyarbakır choro ihe eji eme ihe nhoputa ndi ozo n'oge obula!
Ndi Diyarbakır choro ka ha tinye aka oru. Ndị mmadụ na-achọ ịga ngwa ngwa, n'ụzọ dị mfe na n'enweghị nsogbu. Dị ka akụkọ banyere Seyfettin Eken si Güneydoğugüncel; "More [More ...]